Markii labaad, waxay qarka u saaran yihiin inay gabi ahaanba fashiliyaan jadwalka doorashada ee ay soo saareen guddiga khilaafku ka taagan yahay maadaama waqtigii loogu talagalay ku egyahay maanta oo ah Talaado 5 Janaayo 2021.
Guddigan oo ay magacawday dowladda balse ay ka soo horjeesteen maamulada qaar, musharixiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegay in ay u dejiyeen 5-ta bisha Janaayo maalinta ay qabanayaan araajida musharixiinta Aqalka Sare.
Bishii Diseembar 29, 2020, waxay soo saareen qaraarka iyagoo sheegay inay la wadaageen maamulada dalka.
Waxay dejiyeen taariikhdaas kadib markii ay bedeleen jadwalkii asalka ahaa ee doorashada Aqalka Sare oo ahayd 31 Disember 2020 illaa 6 January 2021, waxayna u beddeleen 7-14 Janaayo 2021 – taas oo aan caddeyn haddii la hirgelin doono.
Wax ka bedelka jadwalka ayaa salka ku haya codsi ka yimid madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoor-qoor]. Qoor-Qoor iyo Hogaamiyaha Puntland Deni oo ku kulmay magaalada Gaalkacyo ayaa wada dadaalo lagu xalinayo khilaafka ka taagan doorashooyinka, gaar ahaan arrimaha ay ka midka yihiin gudiyada iyo ciidamada ku sugan gobolka Gedo.
Dhanka kale, Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, ayaa waxaa Talaadadii dib ugu soo laabtay Guddiga doorashada Maamulka Koofur Galbeed ee dhawaan la magacaabay si ay u bilaabaan howlaha dedejinta qabsoomida doorashada, taas oo aan weli wax xal ah laga gaarin.
Guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa magaalada Muqdisho ku soo qaatay tababar ku saabsan hanaanka doorashada iyo sida loo qabto doorashada labada Aqal ee Baarlamaanka oo laga soo doorto deegaanada maamulkaasi.
Hogaamiyaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa horay u sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in doorashada ay ku qabsoonto waqtigii loogu tala galay, maadaama hogaamiyayaasha dowladda iyo musharixiinta ay wali ku jiraan khilaaf ka dhashay guddiyada ay dowladda magacaawday
Morocco’s blue Chefchaouen become emptied